မန္တလေးမြို့ရှိ တိုက်ခန်း တစ်ခန်းအတွင်း လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ခုနစ်နာရီခန့် အတွင်း ပြစ်မှု ကျ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၂၇
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့ ရပ်ကွက် အကွက်(၁၇၃) (၈၁) လမ်း ၂၄ လမ်းနှင့် ၂၅ လမ်းကြား ခြောက်ထပ်တိုက်ရှိ အခန်းတစ်ခန်းတွင် ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ည ၇ နာရီခန့်က လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြစ်မှုကျုးလွန်သူသုံးဦးအနက် နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အဆိုပါ ခြောက်ထပ်တိုက် လေးလွှာတွင် နေထိုင် သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းနေထိုင်သည့်တိုက်၏ ခြောက်လွှာ အခန်း(–)တွင် ဓားပြတိုက်နေကြောင်း သတင်းပေးချက်အရ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ အမှတ်(၅) မြို့မရဲစခန်းမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ အခန်းတံခါးမှာ ပိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် အပြင်မှနေ၍ အော်ဟစ်ခေါ်ဆိုသော်လည်း ပြန်လည်ထူးသံ မကြားရသဖြင့် တံခါးသော့အား ရိုက်ချိုးဖွင့်ခဲ့ပြီး အတူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာ ယင်းအခန်းတွင်နေထိုင်သည့် ဒေါ်ဥမ္မာကျော်(၅၃)နှစ်ခန့်သည် အခန်းတွင်းရှိ တံခါးနားတွင် လဲ လျောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍ ခုတင်ပေါ်သို့ တင်ပေးခဲ့ပြီး အခန်းအား ဆက်လက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မအေးမိ ဇော်နေထိုင်သည့်အိပ်ခန်းမှာ မီးအမှောင်ချထားသဖြင့် မီးဖွင့်ကြည့်စဉ် မအေးမိဇော်သည် အခန်း ပေါက်ဝတွင် ဘယ်ဘက်ရင်အုံတွင် သွေးများစွန်းပေကာ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေသည် ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
”ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို CCTV မှတ်တမ်းနဲ့အတူ မအေးမိဇော်ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ Call Log တွေကို စစ်ဆေးရာမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ သန်းထွန်းရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကို တွေ့ရှိပြီး လိုက်လံစုံစမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှာ သန်းထွန်းရဲ့တပည့် ချစ်ကောင်းကို ဖမ်းမိတယ်။ သူရဲ့ထွက်ဆိုချက် အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာ သူနဲ့ အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ သန်းထွန်းရဲ့ဇနီး ဖြစ်သူကိုလည်း ဖမ်းထားတယ်။ သန်းထွန်းကိုတော့ ဖမ်းဆီးရမိ ရေး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု အမှတ်(၅) မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အမှတ်(၅)မြို့မ ရဲစခန်းမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လူသတ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကို စုံစမ်းရှာ ဖွေရာ ချစ်ကောင်း(ခ)ကောင်းခန့် (၁၉)နှစ် ၃၅ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်း ထောင့် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် နေသူကို ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နံနက် ၂ နာရီကျော်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်း၏ထွက်ဆိုချက်အရ ပြစ်မှုကျူး လွန်ရာတွင် ၎င်းနှင့်အတူ သန်း ထွန်းနှင့်ဇနီးဖြစ်သူ မသီတာဦးတို့လည်း အတူပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စစ် ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် မသီတာဦး (၃၃)နှစ် ရွှေကျင်ကွက်သစ် ပုသိမ် ကြီးမြို့နယ်နေသူအား ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ချစ် ကောင်း(ခ)ကောင်းခန့်နှင့် သန်း ထွန်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မသီတာဦးတို့ကို အမှတ်(၅)မြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ)၆၃၁/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ-၃ဝ၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားပြီး သန်းထွန်းအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်။
ပြည်တွင်း တင်သွင်းထားသော သကြားများ ပြန်လည် တင်ပို့ရောင်းချခွင့် ရရှိခြင်းကြောင့် မန္တလေး-မ??
အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင် ဘုရားဖူးယာဉ် တိမ်းမှောက်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး